सोखले सिर्जना गरेको व्यवसायिक सम्भावना ! – HamroKatha
सोखले सिर्जना गरेको व्यवसायिक सम्भावना !
नेपालमा एक वर्षमा झण्डै ५ हजार वटा कुकुर विक्रि हुन्छ । जसमा अधिकतम हिस्सा जापनिज स्पिज को छ । त्यस्तै जर्मन सेपहर्ड, पिटबुल, पग पनि अत्याधिक बिक्रि हुने नश्लमा पर्छन् ।
हाम्रो कथा २०७६ असार २९ गते १५:४८
त्यो भनेको लगभग २५ करोड रुपैयाँको वार्षिक बजार हो । र अर्काे छुटाउनै नहुने कुरा भनेको यो बजार झनझन् बढ्ने क्रममा छ । नेपालमा यो व्यवसायको वार्षिक बृद्धिदर न्युनतम १५ देखी अधिकतम ३० प्रतिशतसम्मको छ । यति ठूलो बजार कुकुरको त्यो पनि नेपालमा ।
यो व्यवसाय अहिले स्याच्युरेटेड पोइन्टमा पुगेकै छैन । बजार एकदमै ल्युकरेटीभ छ । निकै नाफा दिन सक्ने व्यवसाय हो डग विजनेस ।
विगत केहि वर्षयता उद्योगको रुप लिँदै कुकुर व्रिडीङका साथै ट्रेनिङ, क्लिनिक, डग फुड, डग एसेसोरिज् लगायतका विभिन्न अन्य व्यवसाय पनि फैलिँदै गएको छ ।
तत्काल कुनै ठूलो घराना वा ठूला व्यवसायीले आँखा लगाउने संभावना छैन ।
एकवर्षमा मात्र सरदरमा ५ हजार उच्च नश्लका कुकुरमात्र किनबेच हुन्छ । केहि हजारको संख्यामा नेपाली ब्रिडपनि बिक्रि हुँदै आएको छ ।
वार्षिक बजार वृद्धिदर नै न्युनतम १५ र अधिकतम् ३० प्रतिशतसम्मको छ ।
नयाँ पुस्ताका मानिसहरु विषेशगरी शहरिया युवतीहरु कुकुरका निकै फ्यान हुन थालेका छन् । क्युट कुकुर बोकेर, खेलाएर टाइम पास गर्ने संस्कृति नै चलेको छ ।
समाजमा विस्तारै मध्यम वर्गिय एकल परिवारको संख्या बढ्दै आएको छ । यसो हुँदा जसो जसो एकल परिवार बढ्छन्, कुकुर पाल्ने सँस्कृतिपनि बढ्दै जान्छ ।
बजारको प्रारम्भिक अध्ययनमा हामीले माग अनुसारको पुर्ति गर्न बजारमा रहेका केनल क्लबहरुलाई धौधौ परेको पाएका छौं । त्यसो हुँदा नयाँ व्यवसायीलाई अवसर प्रसस्त हुन सक्छ ।
र अन्तिम भनेको, निकै थोरै लगानीमा पनि यस व्यवसायलाई सुरुवात गर्न सकिन्छ ।
तर भुल्नै नहुने एउटा मुख्य कुरा भनेको – यदि तपाई कुकुरको व्यवसाय गर्छु भनेर कस्सिनु भएको हो भने तपाई कुकुर प्रेमी हुनैपर्छ । किनकी मान्छेलाई माया गर्छु भन्दै धोका दिन सकिएला, तर कुकुरलाई धोका दिनु भनेको असंभव जस्तै हो ।
संसारमा सबैभन्दा महंगो भनिएको कुकुर २० करोड ४३ लाख रुपैयाँजतिमा बिक्रि भएको थियो । टिबेटियन मास्टिफ प्रजातिको यो कुकुर एक जना ५६ वर्षिय चिनियाँले किनेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । उनले चीनको एक प्रान्तमा आयोजित ‘लग्जरी पेट फेयर’मा लगभग साँढे २० करोड रुपैयाँ जतिमा दुईवटा कुकुर किनेको भन्ने चीनियाँ सञ्चारमाध्यमा खबर छ ।
टिबेटियन मास्टिफ भनेको तपाईहामीले चिन्दै आएको कुकुर हो । नेपालको अलि लेकतिर पाइने भोटे भनिने कुकुर नै टिबेटियन मास्टिफ प्रजातिको कुकुर हो । र संसारको सबैभन्दा महंगो प्रजातिको कुकुर पनि यहि नै हो ।
माथीको तथ्यांक : २०७५ सालको एभरेष्ट केनल क्लबबाट प्राप्त जानकारीमा आधारित